यी १० गल्ती तपाइँलाई कंगाल बनाउछन् ! – Nepal Online Khabar
भाद्र १२, २०७८ शनिबार 604
काठमाडौं : सबैमा धनी बन्ने इच्छा हुन्छ । तर कसैलाई जति मेहनत गरेपनि आर्थिक सं’कट आइरहन्छ। मेहनत गरे अनुसार पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने वास्तुका केही नियमको पनि पालना गर्न जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही गल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
महिलासँग दूश्मनी नलिनुहोस् । शुक्र भौतिक सुखका कारक ग्रह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्रभाव रहनेगर्छ । यसैले शुक्र प्रधान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् ।देवी लक्ष्मिको मुर्ति एक भन्दा धेरै आफ्नो कोठामा नराख्नुहोस् । शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको पुजा विशेष फलदायक मानिन्छ । तपाईंको घरमा धेरै देवीको मुर्ति छ भने आफ्नो सबै कोठाहरुमा अलग–अलग राख्नुहोस् ।
यदि तपाईंको पर्स च्यातिएको छ भने त्यसलाई बदल्नुहोस् र काम नलाग्ने चीजहरुलाई फाल्नुहोस् । एउटा सिक्का शुक्रबारको दिन
देवी लक्ष्मिको मन्दिरमा चढाउनुहोस् अर्को सिक्कालाई रातो कपडामा बेरेर पर्समा राख्नुहोस् ।जीवनसाथीसँग तालमेल बनाइराख्नुहोस् । धन सम्बन्धी विषयमा जीवनसाथीसाग छलफल गरेर मात्रै फैसला गर्नुहोस् ।
विहान उठ्ने वित्तिकै ऐना नहेर्नुहोस् । विहान उठेर दुवै हात जोडेर देवी लक्ष्मीको ध्यान गर्नुहोस् ।
धनसम्बन्धी काम गर्न जानुभयो भने गणेशको पुजा गर्न नभुल्नुहोस् । बुधबारको दिन अनिवार्य रुपमा ५ वटा दुवो चढाउनुहोस् ।बेलुका कसैलाई पैसा नदिनुहोस् । सुत्नुभन्दा अघि पैसा दिनु राम्रो नहुने बताइन्छ ।
शनिबारको दिन मदि-रा सेवनबाट जोगिनुहोस् ।सोमबारको दिन पीपलको पुजा नगर्नुहोस् । यो दिन पीपलको पुजा गर्दा घरमा लक्ष्मिको प्रवेश नहुने विश्वास छ परिवारमा बहिनी र छोरीलाई अपशब्द प्रयोग नगर्नुहोस् ।
यसैगरी पूजा दिनचर्यामा सामिल छ । देवीदेवता वा देवीको मूर्तिको अगाडि पूजा गरिन्छ जुनमा गुड़ र घीउको धूप दिइन्छ, त्यसपछि हल्दी, कंकु, धूप, बत्ती र धूप बाली पूजा गरिन्छ, उक्त देवताको आरती गरिन्छ । पुजामा सबै भगवानको प्रशंसा गरिन्छ । यसैले त्यहाँ पूजा र आरतीका नियम पनि छन् । नियमले गरेको पूजाले फाइदा दिन्छ ।
समय: पूजा र आरती दिउँसो १२ बजे अघि समाप्त हुनु पर्छ । पूजा वा आरती बेलुका १२ देखि ४ बजेको बीचमा पुजा गरिदैन । रातका सबै कामहरू वेदहरूले प्रतिबन्धित ठान्छन्, रातमा पूजा वा यज्ञ गर्ने व्यक्तिहरूको उद्देश्य फरक हुन्छ । केवल पूजा र बलिदानको सात्विक रूप मान्य छ ।
पूजा संस्कृत मन्त्रको उच्चारण संग गरिन्छ । पूजा समाप्त भएपछि आरती गरिन्छ । यज्ञ प्रदर्शन गर्दा यज्ञको पूजा गरिन्छ र यसको फरक नियमहरू छन् । देवताहरू पूजा गरेर खुशी हुन्छन् । पूजाले रोग र शोकको उन्मूलन गर्दछ र व्यक्ति स्वतन्त्र हुन्छ ।
आउनुहोस् हामी कति किसिमको पूजा गर्छौं जानीराखौ ।एक्सेसन: मन्दिर वा मन्दिर सफा, निर्मल्य (भगवानलाई पहिले चढाइएको चीजहरू हटाउनु)। यी सबै कार्यहरू ‘एक्सेसन’ अन्तर्गत आउँदछन्।
कृतज्ञता: गन्धा, फूल, तुलसी पार्टी, बत्ती, कपडाको गहना आदि पूजा सामग्री जम्मा गर्नुलाई ‘उपदान’ कृतज्ञता भनिन्छ ।योग: इष्टदेवको आध्यात्मिक रूपमा महसुस गर्नु भनेको ‘योग’ हो।
स्वाध्याय: मन्त्र जाप गर्दा सुक्त-स्तोत्र आदि पढाउँदै, सम्पत्ति-नाम इत्यादि कीर्तन गर्नु, यी सबै स्वाध्याय हुन्। इज्या: उपचारको माध्यमबाट आफ्नो मनमोहक भगवानको पूजा ‘इज्या’ अन्तर्गत पर्दछ ।
Prevपाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र १२ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नु-होस राशिफल !
Nextचितवनमा ४ दिनमै प’क्राउ परे ८९ फरार आ’रोपी !